यू डिस्क अचानक प्रयोगको क्रममा हरायो - [How to recover by3step]
Your location:Data recovery software>Step>Nepali>यू डिस्क अचानक प्रयोगको क्रममा हरायो
यू डिस्क अचानक प्रयोगको क्रममा हरायो
यू डिस्कले डाटा रिकभरी प्रक्रिया खोल्न सक्दैन
यू डिस्क अचानक प्रयोगको क्रममा हरायो, मलाई लाग्छ धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यस्तै अवस्थाको सामना गरेका छन्, तब, यू के भयो जब डिस्कमा फाईलहरू अचानक हरायो? के USB डिस्कमा हराइरहेको फाईलहरू पुन: प्राप्ति गर्न सकिन्छ? तल, सम्पादकले तपाईसँग यु डिस्कबाट अचानक हराउने फाइलहरू कसरी पुन: प्राप्त गर्ने बारेमा कुरा गर्नेछन्।
यु डिस्कमा फाईलहरू हराइरहेको किन साधारण कारणहरू छन्?
आधुनिक समाजमा, यू डिस्क सबैभन्दा सामान्य डेटा भण्डारण उपकरण हो। यू डिस्क हल्का, बोक्न सजिलो छ, र प्लग र खेल धेरै अवसरहरू र उपकरणहरूमा उपयोगी हुन सक्छ। यद्यपि यू-डिस्कको यी सुविधाहरूको कारणले, यू डिस्कले कहिलेकाँही समय-समयमा केही समस्याहरू निम्त्याउँदछ। उदाहरणका लागि, सामान्य यू डिस्कमा फाईलहरू अचानक हराउँछन् र हराउँछन्। यु डिस्कलाई कम्प्युटरमा जडान गर्नुहोस्। यू डिस्क खोलिसकेपछि त्यहाँ खाली छ। कागजातहरू गए। यो स्थिति तुलनात्मक रूपमा सामान्य हो, तर यो समस्याको कारण तय गरिएको छैन। सम्पादकले यहाँ तपाईंको संदर्भको लागि केहि बढी सामान्य कारणहरूको सारांश प्रस्तुत गर्दछ।
फाइल लुकाइएको छ: कम्प्युटरमा यू डिस्कको गुणहरू जाँच गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ डाटा कब्जा गर्ने ठाउँ छ, तर फाइल प्रदर्शित गरिएको छैन भने फाइल लुकेको हुन सक्छ।
फाईल हराउने: डाटा हराउने थुप्रै कारणहरू छन्, जस्तै मेटाउने, ढाँचा मिलाउने, कम्प्युटर भाइरस, इत्यादि। यदि तपाईले हराउनु भएको पाउनु भयो भने हराएको डेटा अधिलेखन गर्नबाट रोक्नको लागी तुरुन्त लेखन कार्य रोक्नुहोस्।
यू डिस्क टुक्रिएको छ: यू डिस्कको शारीरिक विफलता छ, जस्तै मेमोरी चिप, मुख्य नियन्त्रण, आदि बिग्रिनु।
यू डिस्कमा फाईलहरू रिकभरी विधि हराइरहेको छ: लुकेका फाइलहरू, फोल्डर र ड्राइभहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्
यो विधि लुकेका फाइलहरू पुन: प्राप्त गर्नका लागि उपयुक्त छ। यदि यू डिस्कमा गायब भएका फाइलहरू लुकेका छैनन् भने हराएको फाइलहरू पुन: प्राप्त गर्नका लागि कृपया मेथड २ मा हेर्नुहोस्; यो ट्यूटोरियलले विन्डोज १० प्रणाली प्रयोग गर्दछ। प्रणालीको अन्य विन्डोज संस्करणहरूको विशिष्ट अपरेसन केही फरक हुन सक्छ, तर उस्तै। यहाँ एक उदाहरण छैन।
पहिलो चरण: यु डिस्कलाई कम्प्युटरमा जडान गर्नुहोस्, त्यसपछि फाइल अन्वेषक खोल्न डेस्कटपमा "यस कम्प्युटर" प्रतिमामा दुई पटक क्लिक गर्नुहोस्।
चरण २: फाइल एक्सप्लोररमा USB फ्ल्यास ड्राइभको ड्राइव पत्र फेला पार्नुहोस् र USB फ्लैश ड्राइभ खोल्न ड्राइभ पत्रमा डबल क्लिक गर्नुहोस्।
चरण:: मेनू बारमा "दृश्य" ट्याब क्लिक गर्नुहोस्, र "लुकेका वस्तुहरू" विकल्प जाँच गर्नुहोस्।
यू डिस्कमा फाईलहरू हराइरहेको रिकभरी विधि २: हराएको फाईलहरू पुन: प्राप्त गर्न यू डिस्क डाटा रिकभरी सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस्
यदि फाईलहरू यू डिस्कबाट हराइदियो र यदि यो लुकाइएको छैन भने, यो गल्तिले मेटाउन सकिन्छ। यस अवस्थामा, तपाईं फाईल रिकभरीका लागि डाटा रिकभरी सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए यू डिस्कको फाईल गयो, कुन डाटा रिकभरी सफ्टवेयर राम्रो छ?
Preविभाजन रिकभरी सफ्टवेयर
Nextयू डिस्क फाइल प्रकार द्वारा शक्तिशाली रिकभरी